ဓါတ်ပုံပညာ, ဗီဒီယို | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ဓါတ်ပုံပညာ, ဗီဒီယို
အဆိုပါ matrix ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ၏ parameters တွေကိုဘာတွေလဲကောင်းသောရိုက်ချက်များ A3 ပုံစံများအတွက်ဖြစ်သင့် ???
ကောင်းမွန်သော A3 အမျိုးအစားရုပ်ပုံများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ၏ matrix ၏မည်သည့် parameters များသည် ??? ဤအမှု၏သီအိုရီမှာဤ A3 ကိုမည်သည့်အကွာအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။ 40-50 စင်တီမီတာကနေလျှင်, ပမာဏ ...
ရိုက်ကူးပစ္စည်းများ, themes များ, အမျိုးအစားများ
တီဗီ set-top box ကိုဒီဂျစ်တယ်တီဗီနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် prompt, တီဗီ3input ကို HDMI 1-ARC / 2-လက်မှတ်မထိုး / 3-MHL မဆိုရှိနိုင်ပါသည် ???
ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ၊ တီဗီမှာ HDMI ထည့်သွင်းမှု (၃) ခုရှိပါတယ်။ 3-ARC / 1-Unsigned / 2-MHL၊ သင်ဒီဂျစ်တယ်တီဗီ set-top box ကိုမည်သူမဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည် ??? ဘယ်သူ့ကိုမဆို။ ထို့နောက်အဝေးထိန်းခလုတ်မှအလိုရှိသော input ကိုရွေးချယ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များတွင်ရှင်းလင်းချက်များရှိသည်။
ငါသည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာများအတွက် Monitor ကိုအဖြစ်တီဗီကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သလား? ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ယူကြောင်းရှိမရှိ?
တီဗွီတစ်ခုကိုကွန်ပျူတာအတွက်မော်နီတာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ ဖြစ်နိုင်ပြီးဘာအတွက်လိုအပ်လဲ။ ကွန်ပျူတာမော်နီတာအစားတီဗီကိုသုံးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းအားလုံး၏အဖြေအားလုံးသည်အပြုသဘောဆောင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ? အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်မေးခွန်းအချို့ဤတွင်လူတွေ့မေးမြန်းရန်မေးခွန်းများ - ၆၀ တင်းပလိတ်များသင့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အဘယ်သူသည်နှင့်အရာယျာဉ် De Luxe ထုတ်လုပ်?
De Luxe လျှပ်စစ်မီးဖိုများကိုမည်သူတို့နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ထုတ်လုပ်သနည်း။ အလွန်ညံ့ဖျင်းသောမီးဖို၌အပူချိန်နှင့်အတူအပူချိန်နှင့်မကိုက်ညီသော - သာမိုမီတာပေါ်တွင်ဘွဲ့ရညံ့ဖျင်း။ ပြီးတော့သူတို့သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်အခါသူတို့လောင်ကျွမ်းသောအခါဆူညံသံများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘားမျှအဆင့်ဆင့်ရွံရှာနေကြသည် ...
မော်စကိုတွင်မည်သည့်နေရာတွင်သင်တီဗွီဟောင်းတစ်ခုကိုအသစ်တစ်ခုအတွက်လဲနိုင်သနည်း။ ပြီးတော့ဒါကလူသိရှင်ကြားတန့်နေတာသင်မသိဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများတွင်၊ သင်၏တီဗီကိုရူဘယ် ၁၀၀၀ ယူသွားလိမ့်မည်။
Toshiba TV အတွက် "universal" hama remote ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ။
Toshiba TV အတွက်“ universal” hama အဝေးထိန်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ ထိုကဲ့သို့သောဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုကိုမဝယ်ယူမီ၊ (ညွှန်ကြားချက်များ (မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဖြစ်သင့်သည်) တွင်အထောက်အပံ့ပေးထားသောကိရိယာများမှတ်စုပါရှိသည်) ကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။
/ sg50-50 bnd ဒစ်ဂျစ်တယ် timer နေရာမှာ camelion setting အပေါ်ညွှန်ကြားချက်များရှာဖွေနေ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ !!!
ငါက camelion bnd-50 / sg50 ဒီဂျစ်တယ် timer ကိုတပ်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ညွှန်ကြားချက်ရှာဖွေနေသည်။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ!!! http://mcgrp.ru/instrukciya-Camelion-BND-50-slash-SG3-taymeryi.html?page_to_view=1 http://libcloud.com.es/?page=camelion_bnd-50_sg50_instrukciya အလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်း ၁ ။ ဒီဂျစ်တယ် timer ကို 1 Volt Socket ထဲသို့တပ်ဆင်ပါ။ ၂။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်ဒစ်ဂျစ်တယ် timer ကိုထားခဲ့ပါ။
လှေကားကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ? လှေကားတစ်စီးဝယ်တဲ့အခါဘာကိုရှာသင့်သလဲ လှေကားရွေးချယ်မှု + ဗီဒီယို http://mastremont.ru/publ/spravochnik/vybor_instrumentov/kak_vybrat_stremjanku_video/78-1-0-444 လှေကားတစ်စီး ၀ ယ်သည့်အခါအရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ၄ င်း၏အလုပ်လုပ်သောအမြင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းစွာတွက်ချက်: အမြင့်မှ ...
အိမ်သုံးအတွက်အကောင်းဆုံး acoustics တွေကဘာလဲ။ ငါနားကြပ်အဘို့လည်းဖြစ်၏။ ... "ရုရှားရက်ပ်" ကိုနားထောင်သောတိရစ္ဆာန်အိမ်နီးချင်းများနှင့်သူတို့၏ Panasonic SC-VKX80EE-K "sabs" များမှမိုက်မဲသောအောက်တန်းကျသည့်ဥများနှင့်စကားပြောရန် ...
ရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုတစ် resolution နဲ့တီဗီ? ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ?
ဘယ် resolution တီဗီရွေးမလဲ။ ဘာကောင်းလဲ တီဗီ resolution ကိုအရသာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စျေးဝယ်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်သောတီဗီများကိုကြည့်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံကို။ တီဗီတွင်ထိုကဲ့သို့သောအယူအဆမရှိပါ
pliz ငါ့ကိုပြောပြပါနှင့် 100 Hz LCD ကိုတီဗီ 200 Hz ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသလဲ *
ကျွန်တော့်ကို LCD TV တစ်ခုမှ pliz နှင့် 100 Hz 200 Hz နှင့်အလွန်ကွာခြားပါသလား။ * ဒါက bullshit ပါ။ အဆိုပါမော်နီတာ 60 ဟတ်ဇဖြစ်ပါတယ်။ မျက်တောင်ခတ်လား မများပါဘူး။ မည်သည့်စတိုးဆိုင်ကိုမဆိုရောင်းရန်ကြိုးစားပါ။
LCD ကိုတီဗီ set ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း
LCD TV ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? လမ်းဆုံး။ ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ၊ လူတိုင်းကအဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး (စမတ်မေးခွန်းများမေးပါ) ။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်ပေမယ့်။ "ကောင်းသော" ၏နိယာမအပေါ်ရွေးချယ်ခဲ့သည် ...
ဖြစ်ပွါးခြင်းထံမှ TTL mode ကိုခြင်းဖြစ်သည် ??
TTL flash mode၊ ဒါဘာလဲ ?? နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများရရှိရန်အခြေခံသည်ထိတွေ့မှု၏မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကင်မရာများသည်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဓာတ်ပုံဆရာထံမှအကြီးအကျယ်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြပြီးအားလုံးနီးပါးကမှန်ကန်စွာလုပ်နိုင်သည် ...
အဘယ်သူ၏ကုမ္ပဏီတခု Qumo? QUMO ကိုတောင်ကိုးရီးယား Flash Player နှင့် MP2002 Player ၅ ခု၏ပူးတွဲစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအရှေ့ဥရောပဈေးကွက်သို့လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်။
ဘယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်နိုင်ငံကနေ "အစပြု"? BEKO - TurkeyDaewoo - KoreaGorenje -? Hitachi - JapanLG - ကိုးရီးယား - Panasonic - JapanSamsung - KoreaScarlett - အင်္ဂလန် (တရုတ်?) သောမတ်စ် - ဂျာမနီZanussi - ...
ဘယ် DVB-T2 ကိုလက်ခံမလဲ။ D-COLOR DC1501HDSven EASY SEE-121SUPRA SDT-94MDI DBR-501Tesler DSR-10TELEFUNKEN TF-DVBT205Sven EASY SEE-122 DDOriel 963 (DVB-T2) Mezzo M7802T2 Mystery MMP-71DTandex ? hid = 2amp; CAT_ID = 91105amp; CMD = -CMP = 2401072 သင်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ထားသောမော်ဒယ်အားနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ...
စီးဆင်းနေသောရေနှင့်အတူ soleplate ချွတ်လျှင်, ပုံမှန်ရှိမရှိ?
ရေပိတ်ထားသည့်အခါတစ် ဦး တည်းသောပြားမှရေစီးဆင်းခြင်းသည်ပုံမှန်လား။ သင်ဝယ်ယူသောစတိုးဆိုင်ရှိရောင်းချသူကိုဆက်သွယ်ပါ။ မေးခွန်းဖြေဆိုရန်သတင်းအချက်အလက်မလုံလောက်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်။
လူများ, စမတ်ဖုန်းရွေးချယ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ Sony က, Samsung Asus က, ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ခုခုပိုကောင်းဘယ်ဟာပါလဲ?
လူတွေ၊ ငါ့ကိုစမတ်ဖုန်းရွေးချယ်ဖို့ကူညီပါ။ Sony, Samsung, Asus သို့မဟုတ်အခြားအရာများထက်ဘာကောင်းလဲ။ ကောင်းပြီ, နှစ်ပတ်တကြိမ်, ထို့နောက်သင်၏လက်၌အဘယ်သို့ fit ရန်ယူပါ။ စစ်မှန်သောဘဝ၌သူတို့ကိုခံစားရ။ မုန်းဘူးကိုမမြင်ဘူး
ပထမဆုံးကင်မရာပေါ်လာပြီလား ဘယ်သူတီထွင်ခဲ့တာလဲ ငါ Denis မှားတယ်လို့ထင်တယ် အမေရိကတွင် ၁၉ ရာစု၌ဓာတ်ပုံပညာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံပညာကိုစတင်တည်ထောင်သူများ၊
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ4Next ကို 's Page
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,811 စက္ကန့်ကျော် Generate ။